डा. केसीले किन रोजे १७औँ अनशनका लागि डडेल्धुरा ? कस्तो छ स्थानीयको सहभागिता ? – Health Post Nepal
डा. केसीले किन रोजे १७औँ अनशनका लागि डडेल्धुरा ? कस्तो छ स्थानीयको सहभागिता ?
२०७६ कार्तिक २२ गते १९:०८
चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औँ चरणको सत्याग्रह पाँचौँ दिन शुक्रबार पनि जारी छ । डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट झन्डै एक सय मिटरको दूरीमा निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको निजी घरको तेस्रो तलामा अनशनरत डा. केसी चिसोसित संघर्ष गरिरहेका छन् । डा. केसी अनशन बसेको कोठा घामबाट विमुख भएकाले पनि अनशनको केही दिनमै डा. केसीको स्वास्थ्यमा चिसोको असर देखिन थालेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
अत्यधिक चिसोका कारण सत्याग्राहको दोस्रो दिनमै बिग्रिएको डा. केसीको स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय केही सुधार आएको छ । सत्याग्रहको तेस्रो दिन बोलचाल नै बन्द भएकोमा स्थानीयले कोठालाई न्यानो बनाउने प्रबन्ध मिलाएपछि डा. केसीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको उनको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्दै आएका डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए ।
डा. कँडेलका अनुसार केसी अनशन बसेको गल्लीभित्रको भवनमा घाम नै नपर्दा न्यूनतम तापक्रम ९ देखि १२ डिग्री सेल्सियससम्म हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए । तर, खाना अभावमा डा. केसीको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै आएको उनले बताए । अनशन बस्नुअघि डा. केसीले सोमबार चाउमिन र ५० ग्राम मिठाइ खाएका थिए ।
केसीले अनशनका लागि चिसो डडेल्धुरा नै किन रोजे ?
भर्खरै सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका चिकित्साशिक्षा डा. केसीले १७औँ अनशन बस्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, उनले अनशनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला नै किन रोजे भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ ।
सरकारी निकायमातहतका अड्डामा अनशन नबस्ने घोषणा गरेका डा. केसी अहिले डडेल्धुरामा निजी घरमा अनशनरत छन् । उनी अनशन बसेको घर, डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नीलकण्ठ भट्टको हो । १७औँ अनशनका लागि डा. केसीले डडेल्धुरा नै किन रोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न हामीले ‘फ्ल्यास ब्याक’मा जानुपर्ने हुन्छ ।
१२ भदौमा डा. केसी एक्लै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा आएका थिए । उनले डोटी र डडेल्धुरा आउनुको कारण भने त्यतिखेर खोलेनन् । तर, आफू पर्यटकका रूपमा सुदूरपश्चिम आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसैवेला उनले भनेका थिए, ‘मलाई डडेल्धुरा राम्रो लाग्यो ।’ कतिपयले उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि त्यतिवेला नै अबको अनशन यतै बस्ने संकेत गरेको अड्कल लगाएका थिए
नभन्दै डडेल्धुरा भ्रमणको तीन महिनापछि डा. केसी जिल्ला सदरमुकामा सुटुक्क देखिए । काठमाडौंबाट रात्रिबस चढेर उनी गत सोमबार बिहान कैलाली पुगेका थिए । कैलालीबाट हाइसको यात्रा तय गरी दिउँसो २ बजेतिर डडेल्धुरा पुगे । उनी डडेल्धुरा आउने कसैलाई पनि जानकारी थिएन ।
चिकित्साशिक्षा सुधारको अनवरत लडाइँमा होमिएका डा. केसीले दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्दै छन् । सुदूरपश्चिमको डोटी र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको पुरानै अडान हो । त्यही माग पूरा गर्न राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनी अनशनका लागि डडेल्धुरा आइपुगेको अड्कल धेरैले लगाएका छन् ।
१५औँ अनशन तोड्नेक्रममा १० साउन ०७५ मा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि त्यो बुँदा कार्यान्वयन भने भएको छैन । आफ्नो यो मागलाई पहाडी जनताले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा पटक–पटक निर्वाचित भएको क्षेत्र भएका कारण पनि यस क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब दिन सहज हुने हुँदा डा. केसी डडेल्धुरा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सोमबार नै उनले पूर्वको इलाम र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा वा डोटीमा एउटा मेडिकल कलेज होस् भन्ने मागलाई स्थापित गराउन आफूले अनशनका लागि यसपटक डडेल्धुरा रोजेको बताएका थिए । ‘गत भदौमा डडेल्धुरा पुग्दा डडेल्धुरा अस्पतालको हालत स्वास्थ्यचौकीको जस्तो पाएँ, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा यहाँका स्थानीयले पाएको दुःख देख्दा एकदमै पीडा भएको थियो,’ डा. केसीले भनेका थिए ।
अनशन बस्नुअघि पत्रकारसम्मेलन गरेर डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँगै जनताले पनि शुलभ उपचार पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वस्थ्यअवस्था बिग्रिएको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । हामी प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहान्छौँ भने, स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउने तथा शुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्यसेवा पाउनु प्रधानन्त्रीको मात्रै होइन सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो,’ केसीले भनेका थिए, ‘राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्यसेवा पाउने, अनि विपन्नहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू चारपटक अनशन बसेको उनले बताए ।
प्रत्येक पार्टीको सरकारका वेला आफू अनशन बसेको समेत उनले सुनाए । ‘अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म चारपटक अनशन बसेँ । अरू पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका वेला पनि बसेकै हुँ,’ डा. केसीले भने, ‘मेरा माग पूरा नहुँदासम्म अनशन बसि नै रहन्छु ।’
स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता
डा. केसीको मागमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा डडेल्धुरा पुगेको टोलीले डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटी, शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघ डोटी, होटेल व्यवसायी संघ डोटी र त्रिवि प्राध्यापक संघ डोटीले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले उठाएका माग जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएका छन् ।
मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनले डा. केसीलाई भेटेर पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताएका थिए । बिहीबार डडेल्धुरा नागरिकसमाजले दबाब र्याली नै निकालेर उनको सत्याग्रहप्रति समर्थन जनाएको छ । अहिले केसीलाई भेट्न र उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँका स्थानीयको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । शुक्रबार पनि डडेल्धुरामा ठूलो जनसहभागिमा बसपार्कबाट डा. केसी अनशनरतस्थलसम्म उनको माग सम्बोधनका लागि दबाबमूलक र्यालीको आयोजना गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले लिएनन् चासो
अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न हालसम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रदेश सांसद मल्ल र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टबाहेक अन्य जनप्रतिनिधि पुगेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले उनको माग र स्वास्थ्यअवस्थाबारे चासो नदेखाएको पाइएको छ । ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका ६ स्थानीय तहसहित प्रदेशका ८७ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ३१ प्रदेश सांसद र १६ प्रतिनिधिसभा सांसदले सत्याग्रहबारे चासो नलिएका हुन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवाले नै हालसम्म आफ्नो गृहजिल्लामा अनशन बसेका केसीको अवस्थाबारे चासो दिएको पाइएको छैन । सत्तापक्षी नेकपाका जनप्रतिनिधिले त यसअघिका अनशनदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।